Demyelinating isifo zobuchopho - inkinga engathí sina ngempela futhi iyingozi, ngoba lesi sifo sihlasela izicubu emsipheni, okuyinto Yiqiniso, kuthinta wonke umzimba. Ngakho-ke yini isimo esifana? Yini izimpawu ephelezelwa? Zikhona ukwelashwa ngempumelelo.
Iyini inqubo demyelinating?
Ezinye eziyimpumelelo ezinzwa (ikakhulukazi, axons we neuropathy uhlelo sezinzwa) imbozwe ethize myelin emgodleni. Lesi sakhiwo enezinto eziningi imisebenzi ebalulekile. Ikakhulukazi, myelin obhekene izinga ukudluliselwa pulses kagesi the izinzwa. Ngaphezu kwalokho, igobolondo engikhiphela umgoqo nokusekela imisebenzi, futhi unesibopho amandla eziyimpumelelo emsipheni.
isifo Demyelinating zobuchopho ephelezelwa noma ngenye kungalimaza emgodleni myelin, okuyinto, ngokwemvelo, kuthinta amangqamuzana ezinzwa. By the way, izifo demyelinating ukumela iqembu lonke izilonda ezihlukahlukene isimiso sezinzwa, ngamunye ephethe izici zayo siqu futhi kuhambisana isethi eyingqayizivele izimpawu.
Demyelinating isifo zobuchopho: Izimbangela
Akukhona njalo kungenzeka ukuthola imbangela inqubo enjalo. Nokho, ezokwelapha zesimanje samukelwa ukwaba ezinye zezici ingozi enkulu. Ngokwesibonelo, ngokuvamile leso sifo eba phezu isizinda izifo ngofuzo, kuhlanganise acidaminuria, leukodystrophy, isifo sika-Alexander, njll
Kungenzeka Demieliziatsiya atholwe uhlamvu. Kwezinye izimo, ukulimala myelin emigodleni kwenzeka ngokumelene ingemuva kwezifo ezithathelwanayo ukuvuvukala, okungenani - emva nokwethulwa kwemigomo. Izifo ezifana ehlasela umzimba kanye multiple sclerosis, acute myelitis transverse nazo zingase zibangele demyelination ka yezinzwa.
Ngakolunye uhlangothi, izifo ezifana kungahle kubangelwe yini izifo ezithile umzimba. Ngokucacile, imbangela ngokuvamile sibi vitamin B12 ukuntuleka kwamavithamini, ukungezwani emaphakathi Pontina mielinoz nezinye izimo ezithile.
Demyelinating isifo zobuchopho: izimpawu
Yiqiniso, abantu abaningi banesithakazelo, ngalokho izinguquko kudingeka sinake. Ngeshwa, kulokhu izimpawu incike indawo lesion, isigaba kanye Yiqiniso lesi sifo.
Ngokwemvelo, zikhona ezinye zezimpawu ezikhombisa ukuthi kungase kubonise ukuthi umuntu eba omunye noma kwenye isifo demyelinating zobuchopho. Njengoba ojwayelekile, ngokuyinhloko isiguli eba ukukhathala kwehle ukusebenza. Izimpawu main Lingase lihlanganise elithile kusebentisana kahle kanye nezinguquko Gait, ukuzamazama.
Ngaphezu kwalokho, ezinye iziguli ukubika ukuzwela ushintsho - kungaba noma ukhule noma uwa noma ngisho zinyamalale ngokuphelele. Izibonakaliso zihlanganisa ngakanye Futhi ukushiswa ukuzwa futhi ukuluma emikhawulweni.
Ngaphezu kwalokho, demyelinating isifo zobuchopho futhi kungabangela ukungasebenzi kwezitho okhalo. Ngokwesibonelo, ezinye iziguli kufanele nokugcinwa fecal noma urinary, noma, Ngakolunye uhlangothi, incontinence.
Njengoba kulindelekile, laba izifo futhi kuthinte isimo sengqondo yomuntu. Kwangathi okucindezeleka, izifo ezithile zokuziphatha. Ngokuvamile demyelination okuqhubekayo kubangela ukwehla ezingeni intelligence.
Izifo ezivame kakhulu kubangelwa inqubo demyelinating
Eqinisweni, kukhona izifo eziningi, ngandlela-thile exhunywe ne inqubo ukulimala myelin zesivikelo sesifuba. Ngokwesibonelo, kubhekwe isifo Devic sika kwetfulwe ezithile, okuyinto kuhambisana ukuvuvukala demyelination we izinzwa optic futhi izingxenye ezithile ze-nomgogodla.
Ukuze yizifo ezingamahlalakhona futhi ahlobene atrophic sclerosis lateral, okuyinto evame kakhulu kubonakala yobudala emaphakathi. Uhlu izifo kungenziwa agcwaliswa pathologies ezifana encephalomyelitis acute, Krabbe isifo, encephalitis periaksialny futhi Balo sclerosis eyindilinga (kwande esemncane), Marburg amaningi sclerosis nabanye abaningi.
Uma kukhona izinsolo kancane leso sifo kufanele kudokotela. Ngokwemvelo, zikhona izindlela eziningi sifo, kodwa uhlobo "izinga legolide" kuyinto-magnetic resonance imaging ekhanda. Imiphumela MRI ukusiza udokotela ukucacisa kwasendaweni yenqubo demyelination, futhi isinyathelo ekuthuthukiseni lesi sifo, ikakhulukazi flow yayo ngesilinganiso kanye nenqubekelaphambili.
Esikhathini esizayo, olunye ucwaningo, ngokukhethekile, igazi cerebrospinal fluid, njll Lolu vivinyo enze kube nokwenzeka ukuba kutholakale imbangela yokushona lesi sifo, okuyinto ebaluleke kakhulu ukulungiswa i nokwelapha okusebenzayo lwemithi.
Ingabe kukhona ukwelashwa okuphumelelayo?
Ngeshwa, kuze kube manje akukho amathuluzi angakusiza ngokushesha futhi ngokuphelele akhulule isiguli kusukela ukucinana efanayo. Nokho, njalo ngonyaka zikhona izidakamizwa nokuningi elibekelwe iziguli kwathiwa unesifo "isifo demyelinating zobuchopho." Ukwelashwa Yiqiniso, kuncike zilwane kanye komqondo nezinga lokukhula kwengane lesi sifo.
Kubhekwe izidakamizwa impela interferon beta, okuyinto block kuhle inchubekelembili kwaleso sifo futhi ingozi ukukhubazeka. Ngokwezibalo, inkambo ukwelashwa ngo-30% kunciphisa amathuba okuvela zezenzakalo ezikule ncwadi.
Kuya ngemvelo yokwelapha isifo futhi kuhlanganisa nokwamukela imisipha relaxant, izidakamizwa eqeda ukuvuvukala (ngokuvamisile corticosteroids) nezidakamizwa cytostatic. Kahle umsebenzi ubuchopho ehlaselwe izidakamizwa nootropic, acid acid izakhiwo kanye amalungiselelo - neuroprotective.
Mayelana ukwelashwa okunjalo kudinga isifo demyelinating zobuchopho. Onalesi sifo ngoba iziguli incike izinhlobo kanye namafomu lesi sifo, kanye izinga layo phambili, kanye neqophelo eliphezulu lokunakekelwa olunikezwa umuntu. Futhi ungakhohlwa ukuthi kwemithi emisha lusaqhubeka.
Pancytopenia - isimo sokugembula lapho incipha egazini afundwa tonkhe tincenye kwengoma. Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Izingane sinusitis: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa
Umuthi 'zemikhosi. izinkomba
Alex kanye Mason: bahlangana kanjani?